छात्रबृत्तिमा अमेरिका गएका नेपाली युवकको गो’ली काण्डमा निधन, धेरै नेपाली भागेर बाँचे? – Hamro24News
July 17, 2021 adminLeaveaComment on छात्रबृत्तिमा अमेरिका गएका नेपाली युवकको गो’ली काण्डमा निधन, धेरै नेपाली भागेर बाँचे?
काठमाडौं, जेठ ३१ । मेरिल्याण्ड भएको गो ली काण्डमा ज्यान गुमाउने नेपाली युवा सागर घिमिरेको आज अन्त्येष्टी गरिने भएको छ ।
परिवारसंगको सहमतिपछि आज दाहसंस्कार गर्न लागिएको मेरिल्याण्ड राज्यको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद ह्यारी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
२४ बर्षका स्वर्गीय घिमिरे वाउन्टीमोर काउन्टीमा रहेको वुडल्यानमा वस्दै आएका थिए । मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएको व्यक्तिले चलाएको गो ली बाट घिमिरेको मृत्यु भएको थियो । उनी पूर्ण छात्रबृत्तिमा अमेरिकामा अध्ययनका लागि आएका थिए ।
घटनामा एक नेपालीको घर पूर्णरुपमा धवस्त भएको थियो भने सर्लाहीका श्याम अधिकारी घाइते भएका थिए । बन्दुक धारीले अन्य नेपालीहरुलाई पनि लखेटेको र भागेर ज्यान बचाएका थिए ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
माधव नेपालको वि’रोध गर्नेको हात, खुट्टा का’टिदिने र ठाडो आँखाले हेरे आँखै फो’डिदिने चे-तावनी?
आमा बितेपछि सेतै कपडामा भ्वाइसको स्टेजमा पुगेर सबैलाई रुवाए ट्याक्सी चालक कर्णले?